काठमाडौँ- यस वर्षको ‘आमाश्री (मिश्रीमैया विष्ट र ईश्वरी कार्की) पुरस्कार’ साहित्यकार सुलोचना मानन्धरलाई प्रदान गरिएको छ ।
तरेली साहित्यिक प्रतिष्ठानले प्रदान गर्ने सो पुरस्कार आज आयोजित कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले प्रदान गरे । त्यसैगरी यो वर्षको ‘मसी (मधुकर कार्की र शिवहरि विष्ट) सिर्जना पुरस्कार’ साहित्यकार बालचन्द्र श्रेष्ठ प्रवाहलाई प्रदान गरिएको छ ।
पुरस्कारको राशि जनही रु १० हजार रहेको छ । तरेली सम्मान २०७६ बाट शिक्षाविज्ञ बुद्धि कार्की सम्मानित भएका छन् ।
त्यसैगरी मन्त्री भट्टराईले साहित्यकार विज्ञाता कार्कीद्वारा लिखित ‘आँचलको आँगन’ नामक निबन्ध सङ्ग्रहको विमोचन गरे । सङ्ग्रहमा जन्म, मृत्युलगायत मानिसको जीवनसँग सम्बन्धित १८ निबन्ध समावेश गरिएको छ ।
सोही अवसरमा मन्त्री भट्टराईले सरकारले नेपाली भाषा, साहित्य र संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने योजना बनाएको बताउँदै आगामी वर्षहरुमा प्रोत्साहनस्वरुप युवा लेखकको नाममा मन्त्रालयले युवा लेखन पुरस्कार स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
ऐतिहासिक तथ्यमाथिको विवेचित साहित्य
यस वर्षको मदन पुरस्कार 'रणहार'लाई
भन दिलमा के छ ? (गजल)
विद्यालयमा भएको आगलागीमा परी २८ को मृत्यु मोनरोबिया- लाइबेरियाको राजधानी मोनरोबिया नजिकै भएको आगलागीमा परी कम्तीमा २८ जनाको मृत्यु भएको छ । विद्यालयमा भएको सो घटनामा परी मृत्यु भएका मध्ये २६ जना बालबालि...
राष्ट्रसङ्घीय महासभामा सहभागी होला इरान ?
दर्जनभन्दा बढी पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गरिसकेका डोनाल्ड ट्रम्पले गरे नयाँ सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त
शेयर बजारमा उत्साह, कारोवार रकमका आधारमा शिवम् सिमेन्ट शीर्ष स्थानमा
एक किलो चियाको मूल्य ३५ हजार ! हारालुस शैलीमा बिक्छ